विराट मेडिकल कलेजमा हिप ज्वाइन्टको सफल प्रत्यारोपण – Health Post Nepal
विराट मेडिकल कलेजमा हिप ज्वाइन्टको सफल प्रत्यारोपण
२०७६ मंसिर १६ गते १८:२५
विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले हिप ज्वाइन्ट (नितम्बको जोर्नी) प्रत्यारोपणमा सफलता हात पारेको छ । गत साताको सोमबार (९ मंसिरमा) हस्पिटलमा हिप ज्वाइन्टको पहिलो सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो । हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. अजय महतोको नेतृत्वमा हस्पिटलले सो सफलता हासिल गरेको हो । निकै जटिल मानिने जोर्नी प्रत्यारोपण सर्जरी नेपालको पूर्वाञ्चलमा त्यति विकसित नभइसकेका कारण धेरैजसो बिरामी उपचारका लागि भारतलगायत अन्य देशमा जान बाध्य छन् । तर, विराट मेडिकल कलेजमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध भएपछि बिरामीलाई ठूलो राहत पुग्ने भएको छ ।
अस्पतालले हिप ज्वाइन्टको प्रत्यारोपणसँगै घुँडाको प्रत्यारोपण र दूरवीनद्वारा गरिने शल्यक्रिया सेवासमेत दिने भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित बहुप्रतिष्ठित एम्स हस्पिटलबाट विशेषज्ञता र फेलोसिप गरेका डा. अजय महतोले विराटमा सेवा सुरु गरेका हुन् । सप्तरी निवासी ७० वर्षीय उमेशप्रसाद साहको दुवै हिप ज्वाइन्ट एभिएन रोगले बिग्रिँएको थियो ।
उनले दाहिने हिपको प्रत्यारोपण दुई वर्षअघि धरानमा गराएका थिए, तर राम्ररी हिँड्न सकेका थिएनन् । देब्रे हिप पूर्ण रूपले बिग्रिएको र ज्वाइन्टमा खाल्डोसमेत भएकाले उनी वाकर र ह्विल चेयरको सहारामा हिँडडुल गर्न बाध्य थिए । तर, विराटमा देब्रे हिप ज्वाइन्टको सफल प्रत्यारोपणपछि उनी विनासहारा हिँड्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अब उनी विनादुखाइ जहाँ पनि हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन् ।
साहको जटिल शल्यक्रियामा डा. अजय महतोको नेतृत्वमा डा. मिथलेश गुप्ता, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ डा. कनकलगायतको सहभागिता थियो । सफलतासँगै अस्पतालले शल्यक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण टिमलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएको छ । ‘यस्तो रोगको उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल सधैँ तत्पर छ,’ अस्पतालले जनाएको छ । डा. महतोका अनुसार बुढेसकालमा हुने आस्टिआर्थिट्रिक वा कुनै रोग जस्तै, टिबी, गाठिया, बाथरोग, एभिएनका कारण घुँडा र हिप ज्वाइन्ट बिग्रिन्छ । यो पूर्ण रूपले बिग्रिँदा बिरामीलाई हिँड्दा दुख्ने, दुखाइको डरले घरबाट बाहिर निस्कन मन नलाग्ने, आफूले गर्ने नियमित काम गर्न नसक्ने हुन्छ । ‘यस्तो बिरामीलाई घुँडा वा हिप ज्वाइन्टको प्रत्यारोपण गरी कृत्रिम जोडको आवश्यकता हुन्छ,’ डा. महतो भन्छन् ।